छोटो लिंग यसरी तन्काउनुस
काठमाडौँ । मानिसहरुको जीवन सुखमय र आनन्दमय बनाउनका लागि यौन सुख महत्वपूर्ण अनिवार्य मानिन्छ । एक पटक पाएको जीवनमा मानिस दुःखी भएर बाँच्न चाहदैन तपाई पनि त्यही चाहनुहुन्छ । त्यसकारण
महानगरपालिकावासी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकावासी सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन् । महानगरपालिका क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसरहका स्वास्थ्य संस्था नहुँदा महानगरवासीले सरकारले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । उपमहानगरपालिका हुँदादेखि
कम्मर दुख्ने समस्या छ ?
काठमाडौ । अचेल प्रायलाई कम्मर दुख्ने समस्या हुने गरेको छ । समस्याबाट पुरुष भन्दा महिला बढी पीडित छन् । महिलाहरु बढी निहुरिएर काम गर्ने, भारी बोक्ने, सन्तुलित तरिकाले नबस्ने र लामो
खाली खुट्टा हिँड्दाका फाइदा
एजेन्सी । विना जुत्ता वा चप्पल खाली खुट्टा हिड्नु पनि स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । तपाईले यो कुराको बारेमा सोँच्नु भएको थियो ? खाली खुट्टा अर्थात नांगै पैताला हिँड्दा
यस्ता छन् भिन्डी खानुका १० फाइदा
१) भिन्डीले ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको सम्भावना कम हुने बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । २) भिन्डीमा कम क्यालोरी हुने र फाइबर बढी हुने भएकाले तौल घटाउन मद्धत गर्छ । ३) भिन्डीले
काठमाडौँ । वीर अस्पतालमा थाइराइड क्यान्सर पत्ता लगाउने नयाँ प्रविधि भित्र्याइएको छ । ‘हेल्थ केयर सोलुसन’ का निर्देशक रेमन्तप्रसाद भट्टले आज वीर अस्पतालका निर्देशक प्रा डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतलाई सो
रामपुर, पाल्पा, गाउँमै रहेको स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा नपाउँदा गर्भवतीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । रामपुर नगरपालिकाको डाँडाभेगमा अवस्थित दर्छा स्वास्थ्य चौकीबाट गर्भवती भएका महिलाले सेवा नपाउँदा घण्टौँ हिँडेर अन्यत्र जान बाध्य
काठमाडौं । नेपाल, भारतजस्ता देशहरुमा यौनबारे खुलेर कुराकानी समेत हुँदैन तर भियाग्राजस्तै यौनवद्र्धक औषधिहरुको प्रयोग त एकदमै अव्यवस्थित, विना जाँच, डाक्टरसँग सरसल्लाह नै नगरी हुने गरेको छ । खास गरी